ဒို့ဘာသာ (၁၃) ခေတ်ဘုန်းကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒို့ဘာသာ (၁၃) ခေတ်ဘုန်းကြီး
ဒို့ဘာသာ (၁၃) ခေတ်ဘုန်းကြီး
Posted by ashinindaka on Sep 1, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
ဘုန်းဘုန်း မိန့်တဲ့ ဒကာ၊ဆရာ ခေတ်ဆိုတာတစ်ကယ် အမှန်ပါဘဲ ဘုရား ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ကယ် ကိုစိတ်မကောင်း၊ ဝမ်းနဲမိ ပါတယ်။
သံဃာတော်တွေ လူ့အသုံးအဆောင်တွေကိုဘာကြောင့်အကုန်လိုက်သုံးချင်တာလဲဘုရား။ လိုအပ်လို့သုံးတာလား မလိုအပ်ဘဲ သုံးတာလား သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ရော ခေတ်မှီအသုံးအဆောင်တွေ သုံးခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပညတ်ချက်၊ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိပါလား သိချင်ပါတယ်ဘုရား။
ဘုန်းဘုန်းမိန့်တဲ့ ယေဘုယျသံဃာတော်တွေ အထိ တပည့်တော် တို့ လက်ခံကိုးကွယ်ပါတယ်ဘုရား။
သိုသော် ( ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါ ဘုရား) ယေဘုယျ ထက် အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိတတ်လာတဲ့ အခါ တပည့်တော်တို့ မှာ ဦးချရတာ လေးလံလှပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ဖူးတာပါဘုရား။ အလှူခံ ဘုန်းတော်ကြီးက လှူတဲ့ငွေ အသပြာ နည်းလို့ ဆိုပြီး လွှင့်ပေါက်ပစ်ပြီး အော်ဟစ်ပြောဆိုသွားတာပါ ဘုရား။ တပည့်တော် မျက်ရည်တောင် ဝိုင်းမိပါတယ် ဘုရား။ ဘာသာခြားတို့ရဲ့  ရှေ့  မှာမို့ စိတ် မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ သံဃာတော်ကို သင်္ကန်း ဝတ်ဆင် ဦးပြည်းသန့်စင် ထားလိုက်တာနဲ့ အစစ် လို့ပဲ တွေးဆ ချင်ပါတယ် ဘုရား။ အတု အယောင် လို့ ပြောမထွက်ချင်ပါဘုရား။
သံဃာတော်ကို သံသရာထွက်လမ်းအတွက် အားကိုးစရာ ဆရာ အဖြစ်သာ အသုံးပြုချင်ပါတယ်ဘုရား။
Don’t regret, they are “Pu Htu Zin”.
Not only our Buddhist, Some religions also happen like that.
Some —— said ( during worshipping in the —— ),
” he don’t want to heard the coin sound ”
when the donation bag passed through the roll.
( He means, just put the paper money, not the coin )
အရှင်ဘုရား ပို့စ်ကနေ တွေးစရာတွေ အများကြီးရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ လူတွေချည်တွေးနေလို့လည်း မထူးသေးဘူး၊ ဒီစာကို ရဟန်းတော်များ ပိုဖတ်ဆွေးနွေးဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာတော် အနောက်မှာ တပည့်တော် ရှိပါကြောင်း၊ ဆရာတော်ကို ထိရင်လည်း မခံပါကြောင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့လျောက်ထားအပ်ပါသည်။
ရွာဦးကျောင်း နှာစေးချောင်းဆိုးဆရာတော်နှင့် အကြံသမားကြောင်ကြီး Cold Talk
ကြောင် – တပည့်တော်က ဒီညနေပဲ လေယာဉ်ပျံကြီးစီးပြီး အမေရိကားကို ပြန်တော့မှာဘုရား။ နောင်ပြန်လာဖို့ ဆိုတာလည်း ကွေးသောလက် မဆန့်ခင် ဆန့်သောလက် မကွေးခင် အနိစ္စတရားမမြဲလို မသေချာပါဘုရား။ အခုပဲ ရှင်းပေးတော်မူပါ။ အတိုကောက် ရှိမရှိ၊ ဟုတ်မဟုတ် လုံးကောက်သိရရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
ဆြာတော် – ဩော်ဒုက္ခ ဒုက္ခ။ ကိလေသာတယ်များသကိုး။ တကာပြောတာတွေ ဘုန်းကြီးသဘောကျပါတယ်။ ကဲကဲပြန်တော့နော်၊ တော်ကြာနေ ဖလိုက်လွတ်သွားအုံးမယ်။ ဟဲလို ဟဲလို..ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးပြောတဲ့ ရေအကျိုး ဆယ်ပါးမှာ ဘုရားဟော မဟုတ်တာတွေ ဖယ်လိုက်ရင် ရေငတ်ပြေတဲ့အကျိုးတခု xxxxxxxxxxxx……………
ထိုသို့ ဆရာတော်မှ မိန့်ကြားတော်မူသည်ကို အကြံသမားကြောင်ကြီးမှ
ဘာမှမပြောဘဲ ဧည့်သည်များအတွက်ဟု ရေးထားသော ရေခဲသတ္တာထည်းမှ
ကိုကာကိုလာတစ်ဗူးကို ယူ၍ ဖေါက်သောက်ပြီး ကတိုက်ကရိုက်လစ်မည်အပြုတွင်
ဆြာတော် – အိမ်း မောင်မင်းလည်း အပြောကရွှေမန်း
က.. တော့ ချိုမိုင်မိုင်ဆိုသလို ဖြစ်နေပါပေါ့လား
ကျောင်းကန်ဘုရားကိုသာ ရောက်လာတယ် ဘုရားကိုလည်း ဦးမချ
ဘုန်းကြီးကိုလည်း မရှိခိုးဘဲ အလှူခံပြီး ဒိုးပါပကောလား
ဟူ၍ ဆြာတော်မှ မိန့်ကြားလေသတတ်တွင်
အကြံသမားကြောာင်ကြီးမှ လင်ခိုးမလူမိ စတိုင်ဖြင့်
ဆရာတော်ကိုလော ဘုရားစင်ကိုလော မသိသော ဘက်သို့
ဦးတိုက်ပြီး လက်အုပ်ကို ကြာငုံအသွင်လား ဘာအသွင်လားမသိ
( ထိုနေ့က မိုးအနည်းငယ် အုံ့နေ၍ဂြိုလ်တုမှာ ခပ်ဝါးဝါးဖြစ်နေသည် )
ပြုလုပ်ပြီး ခပ်သွက်သွက်လေး ပေါက်စိန်ပေါက် ဦးချ၍ လစ်မည် အလုပ်တွင်
ဆြာတော် – အလို မောင်မင်းကြောင်ကြီး နောင်များ
ဒါယကာကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကိုတွေ့လျှင်ဖြင့်
ရိုသေစွာ ချဉ်းကပ်ပြီး ဘုရားကျောင်းကန်မှာ
လူတို့ပြုရမဲ့ အမှု့ကို မေးမြန်လေကြားသလား
ဆြာတော် – သာဓု သာဓု သာဓု ဒီလို လူသူတော်ကောင်းကို ချဉ်းကပ်ဘို့ ဝန်ခံတာ
ကြောင် – မှန်ပါ့ဘုရား ချဉ်းကပ်ပါ့မယ်ဘုရား
( ဘဲရီးဂွတ်ထ ဘဲရီးဂွတ်ထ ဘဲရီးဂွတ်ထ = ဤက မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုမှာ
ကွယ်လွန်ပြီးအခိုက် သဂျားမင်း အိမ်ဘေးတွေင် ဘုံအသစ် ပေါက်၍
နတ်သမီး တစ်ဖက် ရှစ်ထောင်ကျော်ကျော်ဖြင့် စည်းစိမ်ခံစားခိုက်
နတ်တို့၏ နားဖြင့် အကြံသမားကြောင်ကြီး၏ အသံကိုကြားခိုက်
ဆြာတော် – အိမ် မောင်မင်း ဖလိုက်မမှီဘဲရှိလိမ့်မယ် သရဏဂုံတော့
ဆောက်တည်သွားလိုက် ဘုန်းကြီးကို ခရိုက်စစ်ဖြစ်အောင်လာလုပ်နေရတယ်လို့
ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ
ကြောင် – ဆာမိ ဆာမိ သုံးဆာမိပါဘုရား
For my personal view , I will not . I will only respect and bow who follow the rules of monks. For me , Monks do not need to know Obama , Gaddafi falls , Irene hurricane , Do not need to hold I’phone. Gtalk , face book. I’m sorry but you can say I’m conservative.
ဘုန်းဘုန်း ဘုရား တပည့်တော် တော့ အမြင် စိတ် အကြားအာရုံ (ဒွါရခြောက်ပါး) များနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် သင်္ကန်း(ဘုရားပေးတဲ့ ယူနီဖောင်း ) ကိုပဲ ဦးတည် ကန်တော့ လိုက်တာပါ ပဲ။ အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ဟိုမှဖက်တော့ပစ်မှာရေးနေတဲ့.. ကျောက်တုံး..ကျောက်ဆောင်ကို ကန်တော့နေတာထက် ဆိုးနေပြီထင်မိတာပဲ..။
လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊